Computer Technical Notes & Sharing Softwares: August 2011
Team Viewer မသုံးပဲ Team Viewer လိုပဲကြည့် ကြည့်ကြရအောင်....
ကျနော်Window7မှာပါတဲ့ Tools လေးတစ်ခု အသုံးပြုပုံလေး တင်ပြချင်ပါတယ်...Team viewer တို့လို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Tools လေးပါ.. မိမိစက်ကနေ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ၀င်ကြည့်တာတို့ လိုအပ်တာလေးတွေ လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ Toolsလေးပါ...WINDOW TOOLS လေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာပါ...အောက်မှာလုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါဦး.....
၁။ START >> WINDOW REMOTE ASSISTANCE လို့ရိုက်လိုက်ပါ....
၂။ BOX လေးတစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်...ကျလာတဲ့ BOX လေးထဲမှာ အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ ကောင်လေးကို CLICK နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ..
၃။ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ BOX လေးကိုနှိပ်ပြီး ရလာတဲ့ ဖိုင်လေးကို DESKTOP မှာ SAVE ထားလိုက်ပါ...
၄။ SAVE လိုက်တာနဲ့ PASSWORD ပေးတဲ့ BOX လေးပါ။ တစ်ခါတည်း ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်...(BOX ကိုမပိတ်လိုက်ပါနှင့်...)
၅။ ရလာသည့် FILE နဲ့ PSSWORD ကို ကြည့်မည့်သူ ဆီသို့ G-TALK မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးလိုက်ပါ...
၁။ ကြည့်ခံရမည့်သူ ပို့လာတဲ့ ဖိုင်ကိုဖွင့် ပြီး ပေးထားတဲ့ PASSWORD ကို BOX ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ..
၂။ ကြည့်လို့ ပြုပြင်လို့ရသွားပါပြီ...
သူငယ်ချင်းအားလုံးပဲ အဆင်ပြေနားလည်မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ်....
Posted by SLIP at 9:25 AM0comments
Labels: Team Viewer မသုံးပဲ Team Viewer လိုပဲကြည့် ကြည့်ကြရအောင်
DriverScanner 2011 ဆောစ့်ဝဲလ်နှင့်Genuine Activator for Windows XP Vista and Win 7
သူငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးကDriverScanner 2011 ပါ
DriverScanner က မိမိစက်မှာရှိတဲ့ Driver တွေကို update လုပ်ပေးတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
သူငယ်ချင်းတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် သူရဲ့ ပရိုမိုးရှင်လိပ်စာဆီကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်ပါ
this promo page ကိုကလစ်လိုက်ရင် get your free product ကိုကလစ်လိုက်ပါ(ပရိုမိုးရှင်လိုင်စင်ကုန်ဆုံးရက်က အောက်တိုဘာ 31ရက်နေ့ပါ)
အနီစက်ပြထားတဲ့ အကွက်တွေမှာ ဖြည့်လိုက်ပါ မေးလိပ်စာမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့မေးလိပ်စာကိုထည့်လိုက်ပါ
ဖြည့်ပီးသွားရင်တော့ Registration ကိုကလစ်လိုက်ပါ
အဲဒါဆိုကိုယ်ရဲ့ဂျီမေးထဲကိုမေးတစ်စောင်ဝင်လာပါမယ် အဲဒါဆိုရင် လိုင်စင်ကုတ်လေးရပီခင်ဗျာ
Uniblue DriverScanner 2011ကို Download လုပ်ပါ driverscanner.exe
ပီးတော့ စက်ထဲကိုမောင်းထည့်ပီး မိမိမေးထဲဝင်လာတဲ့ လိုင်စင်ကုတ်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ
(အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာမှ လိုင်စင်ကုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်) အဲဒါတွေလုပ်ပီးသွားရင် စက်မှာ scan ဖတ်လို့ရပါတယ်ပီ update လုပ်သင့်တာတွေကို update လုပ်ယုံပါဘဲခင်ဗျာ
နောက်တစ်ခုကတော့ Genuine Activator for Windows XP Vista and Win7ပါ 7.43 MB ရှိပါတယ်
http://ifile.it/gko678s (or) http://www.4shared.com/ ဒါကကျွန်တော်ပြန်တင်ထားပေးတဲ့လိပ်စာပါ
Posted by SLIP at 9:22 AM0comments
Hardware Key : Discovery
Registration Key : FMYKYS
Dowloading Link (1)
dowloading Link (2)
Dowloading Link (3)
Posted by SLIP at 9:21 AM0comments
Labels: Antivirus, USB
Posted by SLIP at 9:18 AM0comments
အခုလိုနမှုနာပုံစံအတိုင်းဖြည့်ပြီးတော့ Request license now ကို ကလစ်နိုပ်လိုက်ပါ
မေးလိပ်စာမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့မေးလိပ်စာထည့်ပါ ကလစ်ပီးရင် မေးထဲကိုမေးတစ်စောင်ဝင်လာပါမယ် လိုင်စင်လိပ်စာလေးကိုကလစ်လိုက်ပါ အခုလိုလေးတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ 29ရက်က ကျွန်တော် အရင် လိုင်စင်ယူတုန်းကပါအောက်က 184 ရက် အခု လိုင်စင်အတွက်ပါ သော့ပုံလေးကိုကလစ်ပီးDownloadလုပ်နိုင်ပါတယ် အဲဒါဆို 184ရက် အတွက်လိုင်စင်ကီးရပီခင်ဗျာ
ကီးထည့်နည်းကတော့ HBEDV.KEY မှာထည့်လိုက်ယုံပါဘဲ
Posted by SLIP at 9:17 AM0comments
Isa server 2006 မြန်မာလိုစာအုပ် 2.72Mb
ရာမညဖိုးလပြည့် ရေးသားတဲ့ Isa server 2006 မြန်မာလိုစာအုပ် ပါ။
Posted by SLIP at 5:43 PM0comments
စာအုပ်ကြည့်ပြီး အိမ်မှာ ထိုင်လုပ်လို့ရအောင် ကျွန်တော် pdf ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မလိုပါ။ Wamp Server နှင့် Joomla 1.5 ၂ ခု ကိုပါ တစ်ခါတည်း ဒေါင်းသွားကြ စေချင်ပါသည်။
Download Joomla 1.5 Package
Posted by SLIP at 5:42 PM0comments
AVG9Pro with key to 2018 | 112 MB
ဒီ Antivirus စော့ဝဲလေးကိုလဲ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.....ကြာရှည်စွာ သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါ......စော့ဝဲအတွက် Key တွေပါ တခါတည်းထည့်ထားပေးပါတယ်........
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ.......
Ifile part-1 | Ifile part-2
Mediafire part-1 | Mediafire part-2
Posted by SLIP at 5:37 PM0comments
How to Enable or Disable Comments in Google Plus Posts ?
Just login to your Google Plus account
Go to your profile tab for post stream .
Clickasmall triangle icon highlighted by circle
Among4options, click “Disable comments” option to disable comments on any particular selected post.
To enable comments in the same posts, hit same triangle anda“Enable comments” option will appear there.
Click the “Enable comments” option
So, found this trick helpful? You can view more in our site. do keep tuning in..
Posted by SLIP at 12:29 PM0comments
Posted by SLIP at 12:28 PM 1 comments
Posted by SLIP at 4:30 PM0comments
သိကြတဲအတိုင်းပါဘဲ Google မှာမိမိရှာချင်တဲ့အရာကို ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရင် ကျွမ်းကျင်သလိုမျိုးရှာဖွေလို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူက ဒီလိုမျိုး "-inurlhtm|html|php) intitle:"index of" +"last modified" +"parent directory" +description +size +(.mp3|.wma|.ogg) ?" ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ဟာတစ်ခုအတွက် အချိန်ပေးပြီး မရေးချင်ကြပါဘူး၊ဒီ Google Hack ကတော့ ဒီလိုမျိုးအရှည်ကြီး ရေးစရာမလိုအောင် အဆင်ပြေပါတယ်၊
ကိုရှာတဲ့ဟာကို တည့်ရေးထည့်လိုက်ရုံနှင့် Direct Links ကိုရှာပေးပါတယ်၊ ကျွန်တော် သုံးကြည်လိုက်တာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ ဆော့ဝဲလ်လစ်တွေရှာဒေါင်းရင် ဒါလေးပဲ သုံးတယ်.... သုံးကြည့်ပေ့ါ များများကလိနိုင်လေးများများ ကိုယ်အတွက်ကျန်လေပဲ အဆင်ပြေပါစေနော့ .... ဒေါင်းချင်ရင်တော့ အောက်မှာ mediafire နဲ့ပဲတင်ထားပေးတယ်....။
Posted by SLIP at 4:29 PM0comments
Posted by SLIP at 4:27 PM0comments
ပေါ်လာတဲ့ထဲက Submit ကိုကလစ်ပါ..............
နောက်ထပ်ပေါ်လာထဲ မှာ ကို့ရဲ့ Facebook password နဲ့ စာလိမ်လေးကိုဖြည့် ပြီး Okay ကိုသာ ကလစ်လိုက်ပါက သင်ရဲ့အရှုပ်ထုတ်ဖြစ်နေတဲ့ Facebook အကောင့်လုံးဝ ပျက်သွားမှာပါ.............
Posted by SLIP at 12:57 PM0comments
သင့်ရဲ့ Password တွေကို Hacker တွေက ဘယ်လိုခိုးလဲ ? ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
ပထမနည်း ( တစ်ခါမှ မပို့ဖူးတဲ့သူက မေးလ်ပို့ခဲ့ရင် မဖွင့်နှင့် )
မေးလ်ပို့ ပြီး ခင်ဗျားတို့ password ကို ယူမယ့် program ကို ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင်နှိပ်ချင်လာအောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ .. ဒါကြောင့် ဂျီမေးလ်စစ်တဲ့အခါ .. ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက် ( ကိုယ့်ကိုမေးလ်တစ်ခါမှ မပို့ဖူးတဲ့သူ ) က ပို့လာရင် ဖတ်လို့တော့ရပါတယ် . အထဲက ဘာကိုမှမနှိပ်ပါနဲ့ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ ..
password ကို ခိုးမယ့် ဖိုင်ဟာ သီချင်း ( SONG + Hack Program ) ဒါမှမဟုတ် .. Software တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. နောက်ပြီး link လေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ( ဥပမာ ဟိုမော်ဒယ်လ်ရဲ့ ဟိုကားကြည့်ချင်ရင် ဒီကိုနှိပ် . ပြီးတော့ ဟိုကားမကြည့်ရပဲ .. password ပါသွားမယ် . သဘောတရားပြောတာပါ )
ဒုတိယနည်း ( remember password မလုပ်နှင့် )
ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့တွေ Gtalk သုံးရင် remember မှာ အမှန်လေးတစ်ခါတစ်လေ ပျင်းလို့ ခြစ်မိရင် .. ခင်ဗျားတို့ရဲ့ password ကို computer က မှတ်သွားမှာပါ .. အဲ့ဒီ Password တွေက Mozilla ထဲရောက်သွားပြီး .. hack မယ့်သူကရှာနိုင်ပါတယ် .
. နောက်ပြီး website တစ်ခု မှာ Member ၀င်တဲ့အခါ .. remember password လုပ်မလားမေးရင် မလုပ်နဲ့ပေါ့ ပိတ်လိုက်ပါ
တတိယနည်း ( အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးရင် key logger ၀င်မ၀င်စစ်ပါ )
တတိယနည်းကတော့ keylogger software ကို ခင်ဗျားသုံးမယ့် စက်မှာ ကြိုတင်ပြီး run ထားတာပါ .. အဲ့ဒီ software က ခင်ဗျား key board မှာရိုက်သမျှကို မှတ်ပေးနေမယ် .. ခင်ဗျား ၀င်သမျှ website တွေကိုလည်း မှတ်ပေးနေမှာပါ .. ဒီတော့ကာ အဲ့ဒီ software လေး run ထားလား မ run ထားလားသိအောင်လုပ်ရမပါ .. ဒီအပိုင်းကိုတော့ အမေ့သား နေလင်းဖြိုးရဲ့ blog ကနေကူးပြီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ..
Ctrl+Shift+Esc ( or) Ctrl+Atl+ Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်လိုက်ဗျာ ..။ Process ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့်ဗျာ ။ ရှိတယ်ဆို keylogger သုံးထားလို့ပေါ့ ။ အမြန် သာ click နှိပ်ပြီး End process ပေးလိုက်ပေတော့ ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ keylogger ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ taskmanager မှာရှိတဲ့ process tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲက ကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲအိုကေထားပြီးကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်တာပါပဲ…ဘာလို့ဆို ရိုးရိုး ယူဆာတွေ အနေနဲ့က ဘယ်လိုဖိုင်လ်က အချက်အလက်တွေကို ရီကော့ လုပ်တာလဲဆိုတာ မသိနိုင်တော့ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း အားလုံးကို end process လုပ်ပြီး ကိုယ်သုံးတဲ့ကောင်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Posted by SLIP at 12:33 PM 1 comments
1.Microsoft office 2007 ultimate
2.Microsfot office 2010 Full Silent Install
3.Microsoft office 2003
4.Adobe Acrobat9Pro Full
5. Portable All Office Converter Platinum v6.4
Utilities ***All Full Versions***
1.TuneUp Utilities 2010 9.0.4400.16
2.Your Uninstaller Pro v7.0.2010.13
5.Speed Up MyPC 2010 4.2.6.2
9.Windows7Manager v1.2.5
10.Yamicsoft Vista Manager v4.0.4
11.Yamicsoft WinXP Manager v7.0.0
14.DVD Shrink 3.2.0.15
16.Auslogics Disk Defrag 3.1.7.140
19.Power ISO 4.7
1.Kaspersky Internet Security 2011 11.0.0.232 Final with keys and Kaspersky Trial Reset v3.2
3.AVG Internet Security 9.0.839
11.ZoneAlarm Extreme Security Pro 9.1 Build 508
14.Ad4ware.Pro.Internet Security 2010 v.8.2
15.Avast Antivirus Professional + Avast Internet security 5.0.507 Full
16.Auslogics Antivirus 2010.v.13.0.20.Full
1.WinRar v3.93 Full
2.WinZip Pro 14.5.Build.9095
3.7-Zip 9.15 Beta (32-bit)
1.Internet Download Manager v.6 Full Silent Install
2.uTorrent 2.0.3 Beta 20516
1.Complete Myanmar Font Collections
1.DivX Plus 8.1.0.Full
3.BS.Player 2.54 PRO Build 1038
4.Spider Player Pro2.4.5
5.Quicktime Pro v.7.66.71.0
6.Winamp Pro 5.58 Build 2975
7.Windows Media Player 11.0.5721.5262
11.Real Player SP Gold
12.Quintessential Player 5.0
14.Media Player Classic6.4.9.1
17.iTunes 9.2 (64.bit).
18.iTunes 9.2 (32-bit)
19.GOM Player 2.1.26.5021
20.Audacity 1.3.12 Beta
21.Any Video Converter 3.06
22.CyberLink Power DVD Ultra 3D v10.0.1714
1.Firefox 4.0 Beta 2
6.Avant Browser 2010.Build 8
1.ImageResizer-2.0Vista and window7
5.Fast Picture Viewer
6.FastStone Image Viewer 4.2
8.VSO Image Resizer 4.0.0.46
9.The Gimp 2.6.10
14.Google Earth 5.2.1
15.Fresh View 7.98
1.Googletalk 1.0.0.104 Beta
4.Yahoo Messenger 10.0.0.1270
5.Windows Live Messenger 2010 Beta
1.Window Xp,Vista and Window7Activator
2.Window7Loader 1.8.7 by Daz
3.2010 Window Vista Activators Collections
4.Windows XP.Vista.Office Activator.Genuine.Maker.2.6
5.Win XP SP2 Activator
7.Microsfot Office 2010 Working Activator
1.Microsoft Original Window7ultimate Build 7600
1.Microsoft Original Window XP Professional Service Pack 3
2.Golden XP Professional SP3 Corporate Edition
3.Genuine Window XP Ultimate 2010 SP3
4.့ Windows 8 Ultimate Xtreme Edition x86 By Bro Chitmgmgster
5.Windows Diamond Ultimate 2010 version 3.0 (XP SP3) By Bro IP
6. Silent Install Driver pack collections for xp,vista,window7
7.ကွန်ပြူတာအားလုံးအတွက် 2010 Driver Suite for 7/vista/xp
8.Adobe Photoshop CS5 Full
Posted by SLIP at 12:31 PM0comments
Posted by SLIP at 12:27 PM0comments
Posted by SLIP at 12:24 PM0comments
Posted by SLIP at 12:22 PM0comments
ပြတိုက်မှသူငယ်ချင်းများအတွက် ရှားရှားပါးပါး Windows7ကို (10.08)Mb အထိ ချူံ့ ထားတာဗျာ တွေ့ တော့
မယုံလို့ ဒေါင်းပြီးပြန်ဖြည်ကြည့်တယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ အပီအပြင်ချူံ့ ထားတာ။TURBO လည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်။
အရမ်းကြိုက်သွားတာနှင့် ကိုယ်ပိုင် Upload ပြန်တင်ပေးထားပြီး ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်။Upload လင့် (၆) ခုကနေ
ပေါင်းပြီးတင်ပေးထားတာဖြစ်လို့ အဆင်ပြေမဲ့ လင့်ကသာဒေါင်းယူလိုက်ကြပါလို့လက်တို့ လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။သူ
ငယ်ချင်းတွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဒေါင်းလို့ ရ ပြတိုက်ကလေးမှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကဲအချိန်မကုန်ပဲ ၀င်းဒိုးခွေတစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရမှာဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယူထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ကဲပြန်ဖွင့်ရင်တော့ ဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ။ ကဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
Posted by SLIP at 12:19 PM0comments